के एकलव्य कृष्ण द्वारा मारिएको थियो? - PAMPEREDPEOPLENY.COM - योग-आध्यात्मिकता
के एकलव्य कृष्ण द्वारा मारिएको थियो?
घर योग आध्यात्मिकता उपाख्यान विश्वास रहस्यवाद oi- स्टाफ द्वारा सुपर फेब्रुअरी २,, २०१। मा
महाभारत अस्पष्ट कथाहरूले भरिएको छ मुख्य कहानीसँग मिल्दोजुल्दो। वर्णहरू कालो वा सेतो रंगको हुन सक्दैन। भगवान कृष्ण सहित प्रत्येक चरित्र केवल खैरो रंगमा रंग्न सकिन्छ। ती दुवैले राम्रा र नराम्रा दुवै पाएका थिए धार्मिकता र तिनीहरूमा दुष्ट र नैतिकता र अनैतिक मूल्यहरू।
भगवान कृष्णको बारेमा शीर्ष १० अज्ञात तथ्यहरू
त्यस्तै एक पात्र एकलव्य थियो। त्यहाँ धेरै कथाहरू छन् जुन यस चरित्रको बारेमा बताइएको छ। सबै भन्दा साधारण एक उनको धनुको-तान को औंठी काटेर 'गुरु दक्षिणा' को रूप मा गुरु द्रोणाचार्य को लागी उहाँलाई समाप्त संग समाप्त हुन्छ। तर त्यहाँ धेरै कुरा छन् जुन तपाई सायद सजग हुनुहुन्न, एकलव्यको मृत्यु श्रीकृष्णको हातमा भएको जस्तो।
जन्माष्टमी विशेष: भगवान श्रीकृष्ण कसरी मर्नुभयो?
किन भगवान श्रीकृष्णले एकलव्य जस्तो धर्मी मानिसलाई मार्न सक्थे? प्रश्नको उत्तर र अधिक जान्नको लागि पढ्नुहोस्।
एकलव्य र कृष्णको सम्बन्ध
एकलव्य कृष्णको काकाको भाई थियो। एकलव्यका पिता, देवश्रव, वासुदेवका भाई थिए जो ज in्गलमा हराए। उनलाई शिकारीहरूका राजा निषाद व्यात्रज हिरण्यधनुसले अपनाएका थिए।
कृष्ण गुरु दक्षिणाको पछाडि थिए
भनिन्छ कि कृष्णले आफैंले द्रोणाचार्यको दिमागमा गुरु दक्षिणाको रूपमा धनु तान्ने औंठी माग्ने विचार राखेका थिए। यो निश्चित गर्नु थियो कि एकलव्य अर्जुन भन्दा ठूलो धनुर्धारी नबन्ने।
एकलव्य र जरासन्ध
एकलव्य र उनका कुल, निशाद व्यात्रज हिरण्यधनुसको समयदेखि नै जरासन्धका ठूलो समर्थक थिए। जरासन्ध कृष्णको आर्क शत्रु थियो, जसले एकलव्यलाई पनि उसको शत्रु बनायो, यद्यपि उनीहरू चचेरा भाईहरू थिए।
एकलव्य कृष्ण द्वारा मारिए
जब कृष्ण र रुक्मिणी उम्के, एकलव्यले शिशुपाला र जरासन्धसँग लडे। क्रोधित भएर कृष्णले ढु a्गा उचाले र एक्लव्यमा फ्याँकिदिए र उनको हत्या गरे।
एकलव्यको मृत्युको पछाडि कारण
द्रोण-पर्वमा कृष्णले प्रकट गरे कि उनले जरासन्ध, शिशुपाल र एकलव्य जस्ता व्यक्तिहरूलाई मार्नुपर्‍यो किनभने उनीहरूले पछि कौरवहरूको पक्ष लिने थिए र धर्म स्थापनामा अवरोध खडा गर्ने थिए।
एकलव्य- महान धनुर्धारी
केहि संस्करणहरू भन्छन् कि एकलव्यले आफ्नो धनु तानको औंठा गुमाए पनि, उहाँ अझै पनि एक धनुर्धारी थिए। उसले अनुमान गरिसकेको थियो।
एकलव्य As Drishtadyumna
यो विश्वास गरिएको छ कि कृष्णले एकलव्यलाई उनको मृत्युमा वरदान दिएका थिए कि उनी द्रोणाचार्यको हत्या गर्न पुनर्जन्म हुनेछन्। भनिन्छ कि यो एकलव्य नै द्रष्टाद्युम्नको रूपमा जन्मे र अन्ततः द्रोणाचार्यको हत्या गरे।
चिनमा कपालको बृद्धि कसरी रोक्न सकिन्छ
छालामा अण्डा सेतो को लाभ
लक्स जी सिनेमा पुरस्कार २०१ 2016 पूरा कार्यक्रम
घरमा स्थायी रूपमा अनुहारको कपालबाट कसरी छुटकारा पाउने
जब एक पुरुष एक महिला लाई साँच्चिकै प्रेम गर्दछ